Chinamasa: Zimbabwe Haina Mari yeKubhadhara Zvikwereti Zvainazvo
HARARE — Gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vanoti Zimbabwe haisi kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ku International Monetary Fund, IMF, neWorld Bank, WB.
VaChinamasa vanoti hurumende ichakumbira zvakare mabhanga aya imwe mari yekuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo izvo zvave kudarika mabhiriyoni mana emadhora.
Vachipindura mibvunzo kubva kunhengo dzedare reNational Assembly yekuti Zimbabwe iri kuitei panyaya yekutevedza zvinodiwa nemabhanga eIMF neWB, mukugadzirisa zvikwereti zvayo, VaChinamasa vati chirongwa che IMF che Staff Monitored Program hachina zvachiri kubatsira nyika sezvo hupfumi hwenyika husiri kukura.
VaChinamasa, avo vari kupinda mumisangano nenhumwa dze IMF dzakapinda munyika neChipiri, vanoti kusakura kwehupfumi ndiko kuri kuita kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe, IMF neWB dzinfanirwa kukweretesa Zimbabwe imwe mari kuitira kuti ikwanise kuita zvirongwa zvinounza mari, izvo zvinozoita kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo.
VaChinamasa vanoti Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa ne IMF kuitira kuti iregererwe zvikwereti zvayo. Vanoti izvi zvinosanganisira nyaya yekuvandudza mitemo yekutengesa zvicherwa kuitira kuti zvicherwa izvi zvitengeswe zvakajeka.
VaChinamasa vanotiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itore matanho anoita kuti vemabhizimisi vekunze nedzimwe nyika vave nechivimbo chekutanga mabhizimisi avo munyika.
Vanotiwo zvakakoska kuti hurumende ibhadhare mari kana ichinge yakwereta.